Coral Reef: သူတို့နဲ့ ထပ်ဆုံတယ် (ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရပို့စ်)
သက်ဝေ said on September 1, 2013 at 8:14 AM
အမြဲတမ်း မှတ်မှတ်သားသား ပြီးတော့ မှတ်မှတ်ရရရှိလှတဲ့ ညီမလေး ဇွန်....း-)
အားတဲ့ အချိန်မှ အေးအေးဆေးဆေးရေးနော် ညီမ... ရေးချင်စိတ်ကလေး ရှိနေတာကိုက Blogger တယောက်ပီသနေပါပြီ...း-)
Anonymous said on September 1, 2013 at 12:15 PM
မနက်ပိုင်းခဏတက်တုန်း မမဇွန်ရဲ့ ပို့စ်လေးကို အပြေးအလွှားလာဖတ်သွားတယ်...
နေရာသစ်မှာ အစစ အရာရာအဆင်ပြေပါစေ မမ
Shinlay said on September 1, 2013 at 1:28 PM
ဇွန်အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေ။ တနေ့ တော့ ပြန်တွေ့ ကြ မယ်နော်။
ညိုလေးနေ said on September 1, 2013 at 1:36 PM
Happy Belated Blog Day Dear !
ညီလင်းသစ် said on September 1, 2013 at 9:51 PM
မအားလပ်တဲ့ကြားက ရသလောက် အချိန်လုပြီး ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ တဂ်ပို့စ်တွေမှာ ပါဝင်ရေးသားခဲ့လို့ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ညီမလေးရေ...၊ အင်း.. ဆုံတွေ့ခဲ့ချိန်တွေရဲ့ ကာလအတိုအရှည် duration ထက်စာရင် ဆုံတွေ့ချိန်မှာ ဖြစ်ထွန်းခဲ့တဲ့ intensity က ပိုပြီး အရေးပါတာမို့ တိုတောင်းပေမယ့် အမှတ်တရ ဆုံဖြစ်ခဲ့ချိန် တွေပါပဲ...၊
ပျော်ရွှင်စရာ ဘလော့ဂ်ဒေး ဖြစ်ပါစေနော်...။
ဟန်ကြည် said on September 2, 2013 at 1:46 AM
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော ဘလော့ဒေးဖြစ်ပါစေဗျား...ဒီနှစ်ဘလော့ဒေး မင်္ဂလာရှိပုံများကတော့ ဘလော့ဂါတွေအားလုံး တက်တက်ကြွကြွ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အားရစရာ ကောင်းလိုက်ပါဘိတော့...
ဇွန်မိုးစက် said on September 2, 2013 at 5:29 AM
အစ်မသက်ဝေ... ဒါတောင် ဇွန်က မှတ်မိနေတဲ့ အတိအကျ ရက်စွဲတွေ မထည့်လိုက်ဘူး။ :D ဟုတ်... ညီမရေးပြီးတာနဲ့ အစ်မကို အရင်ဆုံး အကြောင်းကြားလိုက်မယ်နော်။း)
ညီမသူသူ... အပြေးအလွှားလာဖတ်ပြီး မန့်သွားတဲ့အတွက်ရော၊ ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ ;)
ကျေးဇူးပါ အစ်မရှင်လေး...။ ယုံကြည်တယ်၊ တစ်နေ့တော့ ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။း)
Same to you, my dearest Nyo Lay! :)
ထပ်တူညီတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ ဘလော့ဂ်ဒေးပါ အစ်ကိုညီလင်းသစ်။း) duration နဲ့ intensity တဲ့၊ အီကွေးရှင်းထုတ်တော့မယ် အတိုင်းပဲ။ :P
ကိုဟန်ကြည် ပေးတဲ့ဆုအတိုင်းပါပဲ။ ဘလော့ဂါတွေအားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ မင်္ဂလာနေ့လေးပေါ့။း)
သိ င်္ဂါရ said on September 2, 2013 at 11:38 AM
Blogging ထဲမှာ ... Blogger တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်ရတာ ... တကယ့် ကို ... မလွယ်တာပါ ... ၀ါသနာပါတာ သက်သက် နဲ့ လုပ်ရတာပါပဲ ... တကယ် လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ... Blogger အပေါင်းကို တကယ် ပဲ ဦးညွတ်မိပါတယ် ခင်ဗျာ ...
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on September 11, 2013 at 12:05 PM
စာတွေကြားက မမေ့လျော့တဲ့ ဇွန် ပဲရယ်...